'मोबाईलमा निःशुल्क भोईस च्याट गर्नुस्' | मेरो कलम
– यदि तपाईले नेपाल टेलिकमको स्काई फोन प्रयोग गर्नुभएको थियो भने १६१६ नम्वर डायल गरेर निशुल्क भोईस च्याट गर्नुको स्वाद थाहा पाईसक्नु भएकै छ । निशुल्क पठाउन मिल्ने भोईस म्यासेजको मज्जै भिन्नै छ । तर के तपाईले जुनसुकै मोबाईलवाट भोईस म्यासेज गर्न सकिरहनुभएको छ ? यदि मोबाईलदेखी मोबाईलसम्म विश्वको जुनसुकै ठाउँमा निशुल्क भोईस म्यासेज पठाउन चाहिरहनुभएको छ भने वुई च्याट (We Chat ) एप्सको तपाईको लागी उपयुक्त हुनेछ ।
वुई च्याटवाट भोईस म्यासेज मात्रै हैन फोन कल , टेक्स्ट म्यासेज, फोटो तथा भिडियो सेयर पनी गर्न सक्नुहुन्छ । साथै ग्रुप च्याट, लोकेशन म्यानेज, मोमेन्टस् नोटिस् जस्ता थुप्रै सुविधा पनी सोहि एप्सवाट पाउन सक्नुहुन्छ । भोईस च्याटको लागी यो एप्स निकै युनिक भएकै कारण प्रयोग दर निकै वढिरहेको छ ।
भाईवर भन्दा वुई च्याट ईन्स्टल गर्नेको सख्यादर वढीरहेको छ । मासिक २५ प्रतिशतले उई च्याट प्रयोगदरमा वृद्धि भईरहेको तर भाईवर भने करिव ८ प्रतिशतले मात्रै वढीरहेको गुगल प्लेको तथ्याकंलाई आधार मानेर एन्ड्रोईड ¥याङक डट ओआरजीले गएको अप्रिलमा तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो ।
उई च्याटले गुगल प्लेमा भनेको छ यो एप्सले निकै द्रुत गतीमा काम गर्नेछ भने दिर्घकालिन एवं कल गोपनियतामा विश्वसनिय छ । तिन सय मिलियन भन्दा वढी मोवाईलमा यो एप्स ईन्सटल भईसकेको छ । आईफोन, एन्ड्रोईड, विण्डोज नोकिया, व्लायकवेरी लगायत अपरेटिङ सिस्टमका स्मार्ट मोवाईलमा वुई च्याट ईन्सटल गरेर तपाईले यी विविध सुविधा निशुल्क पाउन सक्नुहुनेछ । वुई च्याटको प्रयोग गर्न ईन्टरनेट कनेक्ट भने अनिवार्य छ ।
गर्व गर्नैपर्ने कुरा “नेपालीले बनाए उत्कृष्ट एप्स”
Nepali May 4, 2013
बेवसाईट वेच्ने हो ? मेरो किनिदिनुस् न
Nepali September 16, 2013
Smooth Heart July 18, 2013 Log in to Reply
गुड ! कति पय लाइ थाहा नहुन सक्छ तपाइले यो पोस्ट गरेर धेरै राम्रो गर्नुभयो 🙂
यस्तै अन्य जानकारी यो लिंक मा हेर्नुहोला
bijou lams July 25, 2013 Log in to Reply
हो र ?? ल ल म पनि हेर्छु है 🙂